အပတ်စဉ်ကဏ္ဍများ, 05 ဒီဇင်ဘာ 2018 page pageno
ဒီဇင်ဘာ ၅၊ ၂၀၁၈ - အဲဒီဒေသကို ကိုယ်တိုင်သတင်းသွားယူခွင့်ရရှိခဲ့တဲ့ VOA မြန်မာပိုင်းအယ်ဒီတာ ကိုကျော်ကျော်သိန်း က တွေးဆထားပါတယ်။ ကိုကျော်ကျော်သိန်းနဲ့ ဦးကျော်ဇံသာတို့ ဆွေးနွေးသုံးသပ်ချက် ပထမပိုင်းကို တင်ပြထားပါတယ်။
04 ဒီဇင်ဘာ၊ 2018
ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှဘက် ထွက်ပြေးသွားတဲ့ ဒုက္ခသည်တွေ မြန်မာဘက် ပြန်လာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီး သူတို့ကြားမှာကို မတူကွဲပြားတဲ့ သဘောထားအမြင်တွေ ရှိနေကြပုံရပါတယ်။ ရခိုင်ပြည်နယ် မောင်းတောဒေသနဲ့ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်-မြန်မာ နယ်စပ်မျဉ်းအနီးကစခန်းကို သွားရောက်ပြီး တွေ့ဆုံမေးမြန်းခွင့် ရခဲ့တဲ့ ကိုကျော်ကျော်သိန်းက စုစည်းတင်ပြထားပါတယ်။
သမ္မတဟောင်း George H.W. Bush အမှတ်တရ
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရဲ့ ၄၁ ယောက်မြောက် သမ္မတဖြစ်တဲ့ သမ္မတဟောင်း Geroge H.W. Bush ပြီးခဲ့တဲ သောကြာနေ့က ကွယ်လွန်သွားတဲ့အတွက် မနက်ဖြန် ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ကို တနိုင်ငံလုံး ကြေကွဲဝမ်းနည်းဖွယ်နေ့အဖြစ် အမေရိကန်သမ္မတ Trump က သတ်မှတ် ကြေညာထားပါတယ်။ Michael Bowman သတင်းပေးပို့ထားတာကို ဦးသိန်းထိုက်ဦးက ပြောပြပါမယ်။
အမေရိကန်-တရုတ် ကုန်သွယ်ရေး ရှေ့အလားအလာ
အမေရိကန်နဲ့တရုတ်နိုင်ငံအကြားကုန်သွယ်ရေးစစ်ဆင်နွှဲနေတာအရှိန်လျှော့ချဖို့သဘောတူညီခဲ့ပေမယ့်လည်းလာမယ့်ရက်၉၀အတွင်းကမ္ဘာ့စီးပွားအင်အားကြီး၂နိုင်ငံအကြားရေရှည်တည်မြဲမယ့်ကုန်သွယ်ရေးသဘောတူညီချက်တွေရရှိမလားဆိုတာကတော့မေးခွန်းထုတ်စရာ ဖြစ်နေပါတယ်။Patsy Widakuswara ပေးပို့ထားတဲ့သတင်းလွှာကို ကိုအောင်အောင်ကတင်ပြပါမယ်။
ကမ္ဘာ့ရာသီဥတု ထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာညီလာခံ COP24 ကို ပိုလန်နိုင်ငံမှာ ကျင်းပပြီး ကမ္ဘာ့ခေါင်းဆောင်တွေ တက်ရောက်ဆွေးနွေးနေကြချိန်မှာပဲ မြန်မာနိုင်ငံက လယ်သမားတွေလည်း ပြောင်းလဲလာတဲ့ ရာသီဥတုရဲ့ ဆိုးကျိုးကို ခံစားနေရပါတယ်။ ဒီဆိုးကျိုးတွေကို ရင်ဆိုင်ဖို့နဲ့ ပတ်သက်ပြီး AP သတင်းကို ကိုဉာဏ်ဝင်းအောင်က တင်ပြမှာပါ။
အမေရိကန်လယ်သမားတွေရဲ့ထွက်ကုန်တွေတရုတ်ဈေးကွက်မှာပိုတင်ပို့ခွင့်ရတော့မယ်လို့Trumpပြော၊သမ္မတဟောင်း Bush ရဲ့ ရုပ်အလောင်းကို သမ္မတ Trump နဲ့ သမ္မတကတော်တို့ ဂါရ၀ပြုနုတ်ဆက်၊ရိုဟင်ဂျာတွေအပေါ် ဖိနှိပ်မှုဟာ လူမျိုးတုန်းသတ်ဖြတ်မှုမြောက်တယ်လို့ ယုံကြည်ကြောင်း အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု Holocaust မှတ်တမ်း ပြတိုက် ကြေညာ စသည်
တိုင်းပြည်အတွက် လူ့အဖွဲ့အစည်းအတွက် လိုအပ်နေတဲ့ ကဗျာတွေကို ရေးဖွဲ့နေပြီး ကလေးလူငယ်တွေကို စာသင်ကြပေးနေတဲ့ ကဗျာဆရာ မျိုးတေဇာမောရဲ့  ယုံကြည့်ရာကို နားဆင်ကြည့်ပါ။
သတင်း အကျဉ်းချုပ် (၁၂-၀၃-၂၀၁၈)
ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှကို ထွက်ပြေးသွားတဲ့ ဒုက္ခသည်တွေထဲက ပြန်ဝင်လာမယ့်သူတွေကို ကြိုဆိုလက်ခံပြီး နေရာချထား ဖို့ စခန်းတွေဖွင့်ပြီး အဆင်သင့်ပြင်ထားပေမယ့် အခုချိန်ထိရောက်လာတဲ့သူ မရှိသေးပါဘူး။ တောင်ပြို လက်ဝဲနဲ့ လှဖိုးခေါင်စခန်းတို့ကို ပြင်ထားတဲ့အခြေအနေတွေကို ကိုယ်တိုင်သွားခဲ့တဲ့ ကိုကျော်ကျော်သိန်းက တင်ပြထားပါတယ်။
ဒီနေ့ ဒီဇင်ဘာ ၃ရက်မှာ ကျရောက်တဲ့ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ မသန်စွမ်းသူများနေ့အထိမ်းအမှတ် ရန်ကုန်ကန်တော်ကြီးဥယျာဉ်မှာလုပ်တဲ့ မသန်စွမ်းသူတွေကို ဂုဏ်ပြုကြိုဆိုပွဲအတွင်း မသန်စွမ်းလူငယ်တွေရဲ့ ပညာရေးအတားအဆီးအကြောင်း ဒီကလေးတွေရဲ့ ပညာရေး ကူညီလုပ်ဆောင်ပေးနေသူတဦးက VOA ကို ပြောပါတယ်။ ကိုဇော်ထက် တင်ဆက်ထားပါတယ်။
ဒီဇင်ဘာ ၂၊ ၂၀၁၈ - အစိုးရနဲ့ ဝန်ထမ်းတွေကြား နားလည်မှုရနိုင်အောင်လည်း ကြိုးစားနေတယ်လို့ မြိတ်မဲဆန္ဒနယ်(၂) လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဒေါ်ရီရီချိုက ပြောပါတယ်။ ကိုဇော်ဝင်းလှိုင်က တွေ့ဆုံမေးမြန်းထားပါတယ်။